Google Kutsvaga Result Yemhando Yehondo | Martech Zone
Google's Kutsvaga Result Yemhando Hondo
Muvhuro, Nyamavhuvhu 15, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
SEO.com yakaburitsa infographic pane yekuedza kweGoogle yekupa yakanakisa mitsva yekutsvaga kumusoro. Iko kunakidza kutarisa kumashure kune akakosha matanho akaitwa neGoogle kurwisa masayiti kubva zvisina kukodzera kutonga mitsva yekutsvaga. Kunyangwe izvi zvingaite kunge zvisingaite iwe, zvinodaro. Kuona kuti yako saiti kana ako evatengi 'saiti ari kutevera akanakisa maitiro einjini dzekutsvaga zvakakosha.
Heano kuputsika kwenhoroondo kubva ku SEO.com post:
Dzokorora Panda (Kukadzi 2011) - Google yakatsemura mapurazi ezvemukati nemasaiti aive nemhando yepasi, yakatetepa kana yakaraswa. Tarisa yakaiswa pane yakasarudzika yezvinyorwa uye zvemukati kudzika. Mazhinji mawebhusaiti akakanganiswa neyekuvandudza. Mazhinji mapurazi emukati akarohwa zvakaoma. Iyo Panda yekuvandudza yakaburitswa mumatanho akati wandei mukati megore.
Mayday Kugadziridza (Chivabvu 2010) - Google yakatanga kuvandudza iyo yakatarisana netraffic refu.
Caffeine Gadziriso (Nyamavhuvhu 2009) - Kwidziridzo yakanangana nezvivakwa kuti Google ibudirire kunongedza ruzivo pamhepo, uye riite nekukurumidza. Yakagonesa kugadzirisa kwakadzama, izvo zvakatendera Google kuendesa zvakaringana mitsva yekutsvaga. Iyi yekupedzisira yakazobvumidza Google kuunza peji kumhanya sechinhu chinzvimbo.
Pluto Gadziridza (Nyamavhuvhu 2006) - Kwidziridzo yakanangana neshure kumashure kwakataurwa neGoogle. Kwakange kusina shanduko dzakakosha mukutsvaga kweinjini yekutsvaga.
Hukuru baba (Kukadzi 2006) - Google yakanangana nehukama hwakawanda neinobuda. Masayiti ane yakadzika kwazvo kuvimba mumatanho, kana akabatanidzwa kunzvimbo zhinji dze spam akaona mapeji achinyangarika kubva kuindekisi. Spam saiti akaendeswa mune yekuwedzera chikamu mune yekutsvaga mhinduro. Vashandisi vakaona kuti kunyangwe mushure mekuteerera nerubatsiro rweGoogle kuti mawebhusaiti avo anga achiri kuwedzera.
Jagger Gadziridza (Gumiguru / Mbudzi 2005) - Google yakakurudzira vashandisi kuti vape mhinduro pamusoro pemawebhusaiti akashandisa nzira nhema dzeSEO maranho ekumira zvakanaka. Masayiti akawanikwa achishandisa hunyanzvi hwakadai akabviswa pamhedzisiro yekutsvaga. Google yakachenesa matambudziko eecanonical uye yakanangana nekukosha mukudzokorora kubatanidza.
Allegra Dzokorora (Kukadzi 2005) - Uku kwaive kuyedza kweGoogle kutsvaga nzvimbo dzepamhepo dzakaramba dzichikwira kumusoro mumhedzisiro yekutsvaga. Google yakabvunza vashandisi kuti vape mhinduro pamusoro pemawebhusaiti ayo ainyatsokodzera madanho epamusoro asi haana kuagamuchira. Vashandisi vakanyunyuta kuti saiti yavo yakanyangarika kubva pamhedzisiro yekutsvaga uye kuti mamwe ma spam nzvimbo akatorongeka zvakanaka.
Bourbon Dzokorora (Chivabvu 2005) - Google yakatanga chirongwa ichi mukupindura zvichemo zve spam uye kukumbirwazve. Shanduko dzakachinjika munzira iyi dzakaitwa kuti zviwedzere kushanda. Iyo yekuvandudza yakanangisawo kutama kubva kune zvekare dhata nzvimbo kuenda kune nyowani.
Brandy Kwidziridzo (Kukadzi 2004) - Google yakaisa zvakanyanya kusimbisa pamazwi senge kuvimba, chiremera uye mukurumbira. Kwidziridzo yakaratidza kuti kupa ruzivo rwakakodzera ndiyo kiyi. Paive nekukosha kwakakura kwakaiswa pahunhu hwemukati pane webhusaiti. Google yakasimbisawo kukosha kweLatent Semantic Indexing.
Kuvandudza kwaAustin (Ndira 2004) - Iyo yekuvandudza yakanangana netsika inonzi Google Bombing, uko vanhu vakashandisa system kuburitsa zvinotsausa mhedzisiro. Iko kutarisisa kwakachinjirwa kumasayiti ane mashoma kiyi kiyi kuwanda uye yakanaka yemukati yekubatanidza. Zvibatanidzo zvinopihwa zvakapihwa huremu mune iwo masayiti akabatana nemamwe masayiti muindasitiri yakafanana yakaita zvirinani mumhedzisiro yekutsvaga.
Florida Kwidziridzo (Mbudzi 2003) - Iwo maratidziro airatidzira kushanduka kweGoogle kubva pamafirita ari nyore kuenda kuyedzo yekunzwisisa zvine mutsindo chiyero chekutsvaga uye zvingangoitika zvekutsvaga. Iyo yekuvandudza yakachenesa spam neyakareruka kubatanidza uye zvimwe zvinhu izvo zvakapa huremu hwakawanda kune zvakagadziriswa zvakanaka uye zvakachena zvakabatana nzvimbo. Webmasters vakagamuchira iyo yekuvandudza uye zvakaratidza kuti Google yaive ichipa pekutanga kumusoro kune izvo zvinotsvaga zvevanotsvaga. Iyo yekuvandudza yaive yekuedza kukurudzira chena ngowani mawebhusaiti, ayo aitevedzera kune zvemhando zvinodiwa.
Esmerelda Kwidziridzo (Chikumi 2003) - Yechitatu mune akateedzana ezvinyorwa zvakapa kufarira kune mapeji akapa rumwe ruzivo kune mushanyi. Iyo yekuvandudza yakaratidza kuti emukati mapeji mukati mewebhusaiti anogona kuve nekukosha zvirinani kune iyo Dominic yekuvandudza, iyo yaiita kunge inopa peji rekutanga kushuvira kunyangwe kutsvagisa kwakanangana nemubvunzo wakatarwa. Vashandisi vakashuma kuti spam yaive yakadzikira zvakanyanya pane mushure mekuvandudzwa kweDominic neCassandra.
Dominic Kwidziridzo (Chivabvu 2003) - Iyi yekuvandudza yakatumidzwa zita rekudyira pizza muBoston iyo yaishanyirwa kazhinji nevapindi vePubCon. Iyo yekuvandudza yakanangana nekuita yekutsvagisa maitiro theme, uye kubatanidza iyo data Center kune imwe yakatsvaga. Iyo yekuvandudza yakajekesa kuti yega yega data centre yaifanirwa kuita zvinhu zvakasiyana.
Cassandra Dzokorora (Kubvumbi 2003) - Iyi yekuvandudza yakanangana nezvekukosha kwezita rezita. Pfungwa yaive yekuti makambani anofanirwa kusarudza zita rinoratidza zita ravo rezita.
Kugadziridza kweBoston (Kurume 2003) - Iyo Boston yekuvandudza yakanangisa pane zvinouya zvinongedzo uye zvakasarudzika zvemukati. Mhedzisiro yacho ndeyekuti vazhinji vewebhumasters vakashuma kudonha mumashure backlinks uye kudonha kunoenderana muPageRank.
Skype pane iyo iPad
Goverana, Sevha uye Tsvaga neTrunk.ly